I-Newsletter yabahola impesheni – Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds
/ I-Newsletter yabahola impesheni
IPHEPHANDABA LOKWAZISA ABAHOLA IMPHESHENI
Izindaba zekota yonyaka – Septhemba 2020
UMYALEZO OVELA KUMPHATHI OMKHULU I-CEO
Siyanamukela kwiphephandaba lokwazisa abahola impesheni kuleNtwasahlobo ka-2020.
Lethwese ihlobo nakuba isimo sezulu singenalo ilanga elikhanyayo nezimbali, sinezinto ezimmbalwa ezijabulisayo. Siyaqhubeka nokuzivikela nokuvikela abanye kwi-Covid-19 ngokuziqhelelanisa ngebanga elidingekile nabanye, nangokulandela imigomo ebekiwe yokugcina izandla zihlanzekile ngazo zonke izikhathi, nangokugqoka izimfonyo. INingizimu Afrikha nayo ilokhu iqala kancane kancane ukukhululeka, emva kokwehliselwa esigabeni sika-Level 1 ngomhlaka – 21 Sebthemba – sizwelana nayo yonke imindeni eshiywe abathandiweyo bayo ngenxa yalolu bhubhane.
IMPESHENI YAKHO IQINISEKISWE ISIKHATHI ESINGAKANANI?
Abahola imali yempesheni esikhwameni i-NJMPF baqinisekiswe ukuhola impesheni impilo yabo yonke. Uma kwenzeka kudlula ohola impesheni, umlingani ofanelekile walowo obehola impesheni, uzohola ingxenye yephesenti lempesheni yaloyo obehola impesheni ngesikhathi edlula emhlabeni. Uma obehola impesheni edlule emhlabeni engenaye umlingani, Impesheni iyanqamuka. Awukho umhlomulo okhokhelwa kwizindlalifa zobehola impesheni uma edlula emhlabeni engenaye umlingani, ngaphandle uma ohola impesheni edlula emhlabeni ingakapheli iminyaka engu-5 ethathe umhlalaphansi. Kubalulekile ukwazisa isikhwama uma kudlula emhlabeni lowo ohola impesheni.
• Ikhophi kamazisi egxiviziwe,
• Ikhophi yesitifiketi somshao esigxiviziwe,
• Ikhophi yesitifiketi sokudlula emhlabeni salowo ohola impesheni esigxiviziwe.
Ubani umlingani ofanele?
Umlingani ofanele ilowo obewumlingani obeshade nalowo ohola impesheni ngesikhathi edlula emhlabeni, nobethathwa njengoshade naye ngokusemthethweni yemshado egunyaziwe eNingizimu Afrikha, noma umlingani walowo ohola impesheni abahlangene ngokomthetho womasihlalisane, kulobudlelwano ibhodi labaphathi be-sikhwama liqoqa ubufakazi obuqinisekisa lobudlelwano ngaphambi kokuthatha isinqubo sokwamukela noma sokun-qaba ubufakazi bobulingani. Abanye abalingani kuba abantu abahlanganiswe ngaphansi kwemithetho yanoma iyiphi inkolo esemthethweni abanye basebudlwelwaneni bobulili obufanayo noma obungafani.
UNYAKA WABAHLONISHWA ASEBEDLULE IMINYAKA EYIKHULU BEPHILA
isikhwama sathembise ukusebenzisa imizuzu engu-67 yeMandela Day ukuthola indlela yokunikezela okuthile kumalunga esikhwama, abahola impesheni kanye emphakathini abaphila kuyona. Lona umkhankaso omusha isikhwama i-NJMPF esisanda kuwuqala. Kulonyaka isikhwama i-NJMPF sifuna ukuhlonipha abahlonishwa asebephile iminyaka yaze yadlula kweyikhulu. Isikhwama iNJMPF sivakashele sanikela ngezipho koyedwa walabahlonishwa.
Nggenyanga ka-Okthoba, isikhwama sizoqhubeka sivakashele siphinde sinikele ngezipho kulaba abanye abahlonishwa abahola impesheni esikhwameni i-NJMPF.
Bheka ivideo “yonyaka wabahlonishwa” kwi-website yethu ezofakwa maduze.
Izingoma zokunqoba nokukhala kwenjabulo kungase kungazwakali kahle ngenxa yokuthi singqoke izimfonyo kepha lokho akusona isizathu sokungagubhi sijabule. Ngisho nangezikhathi zobunzima isikhwama i-NJMPF siyaqhubeka nokulwela ukwenza kahle. Ngekota yesithathu yonyaka ka-2020, isikhwama siqhubekile nokuthola inhlonipho evela kubaholi bemboni, saqhubeka nokuba isibonelo esihle kwezinye izikhwama zempesheni eNingizimu Afrikha. Isikhwama i-NJMPF siqukule imiklomelo eyisithupha yokusebenza kahle ohlelweni lwemiklomelo ye-Institute of Retirement Funds Africa Awards, umklomelo owodwa kwi-Acquisition International, imiklomelo emibili kwama-Stevie awards. Isikhwama siphinde saqokwa ukuba sethubeni lokuthola umhloklonyeliwa kwi-World Pension Summit ka- 2020 – kumkhakha wezokuxhumana nokuzimbandakanya namalunga.
AMACEBO OKUKUSIZA NGESIKHATHI SOBHUBHANE LOMHLABAWONKE
Kunzima ukuqagula isimo sezezimali kulesikhathi esikusona kodwa ukuthungatha ukwelulekwa kubaluleki bezezimali abasemthethweni nokuqaphela lamacebo alandelayo kungakusiza kakhulu ekwenzeni izinqumo zezezimali eziphusile.
Ukunciphisa izindleko kuzokhulula enye ingxenye yemali yakho lokho okuzokhulisa imali oyongayo kuphinde kugwemeke ukwenza izikweletu kanye namakhadi ezikweletu.
Unciphise nezikweletu zakho
Ugxile ekukhokheni izikweletu ebese zidalekile ungadali ezinye futhi.
Yenza uhlahlomali uma ungenayo. Lokho kuzokwenza ukuthi ukwazi ukuqondisa kahle izindleko zakho uphinde ukwazi ukubona lapho okufanele unciphise khona noma uyeke ngokuphelele.
Ukuba nesikhwama semali oyigcinile kungadala uzinzo kwezezimali ngaphandle kokuthembela emakhadini ezikweletu ukukhokha izikweletu.
Lamacebo kuhloswe ngawo ukukunika ulwazi kanti futhi akufanele luthathwe njengomthetho noma ngokwalulekwa ngokwezezimali.
UMTHETHO WOKUVIKELWA KOLWAZI (POPAI)
Umthetho i-POPIA uqale ukusebenza ngomhlaka 01 Julayi 2020, sikhwama sizoba nezinyanga eziwu-12 kusukela ngoJulayi ukuze silandele umgudu yokuhambisana nalomthetho ngokuphelele. Njengesikhwama samalunga esibeka amalunga, kanye nokuvikela ulwazi lwamalunga isikhwama phambili phakathi kwezinye izinto ezibalulekile, isikhwama sangena ohambweni lokulandela imigudu efanele yokuvikelwa kolwazi esikhathini esedlule futhi lolohambo luzophetha ngokuhambisana ngokugcwele ngomhlaka 01 Julayi 2021.
Njengoba izwe lithuthelwa ku-level 1 kubalulekile ukukhumbula ukuthi isifo i-Coronavirus asinyamalele, sisekhona phakathi kwethu kanti kusanesidingo sokuzivekela siphinde sivikele nalabo abaseduze kwethu.
Engakhali ifela embelekweni, uma ungazibiki, ukhulume ngenkinga yakho ngeke ubonakale futhi ngeke uzwakale
Ayikho inkomo yobuthongo, impumelelo iyasetshenzelwa
I-Newsletter Julayi 2020
I-Newsletter Ndasa 2020
I-Newsletter Zibandlela 2019
I-Newsletter Mandulo 2019
I-Newsletter Julayi 2019
I-Newsletter Ndasa 2019
I-Newsletter Disemba 2018
I-Newsletter September 2018
I-Newsletter Ndasa 2018
I-Newsletter Disemba 2017
I-Newsletter Juni 2017